juin 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
FETIN’NY SAKRAMENTA MASINA
Dia mankalaza ny fetin’ny Sakramenta Masina ny fiangonana maneran-tany androany.
Natolotra antsika ny Evanjely izay retsika teo, nalaina tao amin’ny Md Joany ao amin’ny took faha-enina. Fa raha iverenana ny teo aloha dia I Jesoa nampitombo ny mofo dimy sy hazandrano roa. Rehefa voky ny vahoaka izay maherin’ny dimy arivo lahy fotsiny, dia lasa nitady an’I Jesoa hatraiza hatraiza. Ary efa nahita an’I Jesoa izy ireo, dia nametra-panontaniana: “Oviana ianao no tonga tety?” Teto dia ny mofo no tadiaviny, dia nahitsin’I Jesoa avy hatrany: “miasà ianareo, mba hihinana ny mofo izay tsy levona mandrakizay”. Teo amin’izay dia nanomboka niova ny resaka. Nampangetaheta an’ireto olona ireto ary nitadiavany sy nanarahany an’I Jesoa nandritra ny lalana lavitra, dia noho ny fitadiavana mofo satria noana izy ireo. Mofo hohanin’ny vatana. Dia avy eo Jesoa niteny: “Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra”. Mofo anefa no hanin’ireto vahoaka ireto. Rehefa afaka ora vitsivitsy ka noana dia miverina mitady mofo indray isika aveo, hany ka manao tahaka ny saka (omeo, omeo foana), na voky na noana. Izay isika olombelona, mihinana sakafo isika amin’ny maraina fa noana avy eo, mihinana koa ny atoandro fa noana ihany avy eo, mihinana koa ny hariva fa noana hatrany, ny ampitso koa torak’izany. Ary rehefa levona ilay mofo dia lasa indray ny vahoaka manaraka an’I Jesoa; ary ny tena tadiaviny di any hoe “Andao hatsangana ho Mpanjaka Izy, far aha ity no mpanjakanatsika, dia hihidy daholo ny mpanao mofo rehetra, fa manaraka an’I Jesoa dia voky ho azy isika”. Fa nahitsin’I Jesoa izay fisainana izay: Raha hanoanana ara-batana notadiavin’ireto vahoaka ireto ho esorina, fa ny an’I Jesoa kosa di any vatany. Eo no nampidiran’I Jesoa ny Eokaristia, satria Md Joany tsy mba nitantara ny namoronana ny Eokaristia Masina. Fa avy hatrany dia eto amin’ny Jesoa Kristy nampitombo ny mofo dimy sy hazandrano roa no nampidiran’I Jesoa fanazavana momba ny Eokaristia.
Hoy Jesoa: “izaho no mofo velona nidina avy an-danitra, raha misy mihinana ny mofo dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia mofo ho fiainan’izao tontolo izao”.
Isika ihany koa dia mametra-panontaniana izay manitikitika antsika, ary izany fanontaniana izany dia tadiavintsika ho valiana avy eo: “Inona ity mofo kely haniko ity? Maninona no atao hoe Eokaristia izy ity?”. (suite…)
Continuer la lecture Alahady sakramenta masina – 22/06/2014 – Toriteny
Alahady sakramenta masina – 22/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky Deterônômy (Det 8, 2-3.14b-16a )
Nanome hanina izay tsy fantatrao sy ny razanao ny Tompo
Tamin’izany andro izany, niteny tamin’ny vahoaka i Môizy nanao hoe:” Tsarovy ireo lalana rehetra izay nasain’ny Tompo Andriamanitrao nandehananao, tany an’efitra, nandritra ny efapolo taona izao, mba hampanetry tena anao, sy hitsapa ny tenanao, dia hahalalany izay hevitrao ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao, na tsia. Nampietry tena anao Izy sy namela anao ho noana, ary namahana anao tamin’ny mana, izay tsy fantatrao, na fantatry ny razanao, mba hampahalalàny anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona, fa izay rehetra mivoaka avy amin’ny vavan’Andriamanitra no iveloman’ny olona.
Aza hadinoina ny Tompo Andriamanitrao, izay nampivoaka anao avy tany amin’ny tany Ejipta, tamin’ny trano fanandevozana, Izay nitondra anao tany an’ efitra lehibe sy mahatahotra misy bibilava mivaivay sy maingoka, amin’ny fitoerana ngàzana sy tsy misy rano; Izay nampiboiboika rano ho anao, avy amin’ny vatolampy mafy indrindra, Izay nanome mana hohaninao tany an’efitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao akory”.
Vakiteny faharoa: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1Kôr. 10, 16-17)
Iray ihany ny Mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza.
Ry kristianina havana, moa ny kalisim-pisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana amin’ny Ran’i Kristy va? Ary moa ny mofo izay vakiantsika, tsy firaisana amin’ny Tenan’i Kristy va? Satria iray ihany ny Mofo, ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro aza, fa Mofo iray ihany no iombonantsika rehetra.
Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 6, 51-59)
Tena fihinana ny Nofoko ary tena fisotro ny Rako. (suite…)
Continuer la lecture Alahady sakramenta masina – 22/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady Trinite masina – 15/06/2014 – Toriteny
FIANAKAVIANA MIAINA AM-PITIAVANA LAVORARY AN’ANDRIAMANITRA.
Araka ny fandaharana litorjikan’ny fiangonana, raha fintinina kely, aorinana’ny Paka dia 40 andro no manaraka ny fiakaran’ny Tompo any an-danitra. 10 andro aorinan’izay no mankalaza ny Pentekôty, ary ny alahady manaraka ny Pentekôty isika no mankalaza ny fetin’ny Trinite Masina. Ary herinandro manaraka ny Trinite Masina ny fetin’ny Sakramenta Masina. Tsara ny ahafantarantsika izay ao anatin’ny fiainan’ny fiangonana. Isan-taona izany, na dia tsy mijery ny kalandrie isika dia efa mahafantatra fa hoe ny Pentekôty dia 40 andro aorian’ny Paka, 10 andro aorinan’ny Pentekôty ny Trinite Masina – Andriamanitra Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Ary ny alahady manaraka ny Trinite Masina isan-taona dia ny Fetin’ny Saktamenta Masna.
Dia androany isika dia ny fetin’ny Trinite Masina no ankalazaina.
Raha azavaina kely ny foto-kevitra aroson’ny fiangonana, dia mampianatra antsika an’Andriamanirta. Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Fa sarotra ho an’ny olona ny mahazo an’io anefa. Na ho antsika aza, ary ady hevitra sarotra hazavaina ny Trinite Masina amin’ny olona; fa mainka moa fa amin’ny ankizy. Inona izany Andriamanitra tokana fa olona telo izany? Ahoana no zavatra tokana nefa telo samy manana ny maha-izy avy nefa mitovy laharana fahamasinana???
Dia ny tantara ao amin’ny tradition-n’ny fiangonana moa dia raha mahita isika ny tantaran’I Md Augustin, ilay teolôjianina tena nandinika. Niaina tao anatin’ny fahotana ngezabe izy tamin’ny fahatanorany, fa noho ny vavaka nataon’I Mb Monique reniny dia nibebaka izy, ary lasa olomasin-dehibe. Ary isan’ny teôlôjianina tena lalina fandinika mihitsy.
Fa nony tonga teo amin’ny fandinihina ity misterin’ny Trinite Masina ity dia tena fanina izy. Ahoana hoy izy izany Andriamanitra tokana olona telo izany?
Tsy hitany izay fomba hamahana sy hanazavana azy.Ary tamin’ny fotoan’andro dia tena naharary ny lohany satria niketriketrika mafy tao izy, fa tsy tafavoaka. Fa teôlôjianina anisan’ny tena malaza I Md Augustin: nanoratra leson-teolojika 13 boky tena lehibe amin’arivo pejy ny iray. Nanoratra momba an’Andriamanitra izy.Fa rehefa narary ny lohany dia lasa mihitsy nandeha nankeny amoron-dranomasina, naka rivotra.
Gaga izy nahita zazakely iray, mandavaka eo amin’ny fasi-dranomasina, ary mitaona ranomasina ho ao @ilay lavaka, mameno izany @ akoran-driaka. Tsy naharitra Md Augustin ka nanontany an’ilay zazalahy kely nony farany.
“Fa inona ity ataonao ity?” dia izao no valinteny: “alaiko daholo io ranomasina rehetra io ary ataoko ao anatin’ity lavaka kely ity”. Dia nihomehezan’I Md Augustin izy “Fa ianao ve adala? Ahoana no ampidiranao an’io ranomasinm-be io ao anatin’ity lavaka kely ity?” (suite…)
Continuer la lecture Alahady Trinite masina – 15/06/2014 – Toriteny
Alahady Trinite masina – 15/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Boky Eksaody (Eks 34, 4b-6.8-9 )
Ny Tompo Andriamanitra dia mamindra fo sy miantra.
Tamin’izany andro izany, dia nifoha maraina koa i Môizy, niakatra ny tendrombohitra Sinaia, araka ny nandidian’ny Tompo azy; nentiny teny an-tanany ny takelaka vato roa. Dia nidina tao anatin’ny rahona ny Tompo ka niara-nijanona taminy teo, sy nanonona ny anarana hoe: Iaveh! Tompo! Ary nandalo teo anatrehany ny Tompo sady niantso hoe: “Izaho no Iaveh! Tompo! Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana”. Niondrika tamin’ny tany niaraka tamin’izay i Môizy, dia niankohoka, nanao hoe: “Raha nahita fitia teo imasonao aho, ry Tompo, aoka re mba hiaraka aminay ny Tompo, fa vahoaka mafy hatoka izy. Avelao ny heloka amam-pahotanay, ary raiso ho lovanao izahay”.
Taratasy faharoan’i Md Paoly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2Kôr 13, 11-13)
Homba anareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy, sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina.
Ry kristianina havana, mifalia, miezaha ho lavorary, mifanalà alahelo, miraisa hevitra, mihavàna tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. Mifanaova veloma amin’ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny olo-masina rehetra. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo, sy ny fitiavan’Andriamanitra, ary ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina!
Evanjely masina nosoratan’i Md Joany (Jo 3, 16-18)
Nirahin’Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy izao tontolo izao amin’ny alalany.
Continuer la lecture Alahady Trinite masina – 15/06/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady Pantekôty – 08/06/2014 – Toriteny
« MPANKAHERY SY MPANAZAVA ARY MPAMPIHAVANA NY FANAHY MASINA”
Dia mbola manantitra ny arahaba amintsika Kristianina rehetra tafavory.
Amin’izao fankalazana ny Pentekoty, dia misaotra anareo tompon’andraikitra ao amin’ny VALIA rehetra satria ny zavatra nataontsika rehetra teo, @izao tapany voalohany izao, dia manampy tanteraka @ fanazavana ny Soratra Masina. Satria na tsy asiana fampianarana intsony aza, raha toa isika ka nandinika tsara ireo fihetsika hatrany amin’ny fiantombohana, h@hira fiantsoana ny Fanahy Masina farany teo, dia na tsy hisy toriteny aza fa dinihantsika fotsiny ny fihetsika , dia heveriko fa efa fampianarana goavana be.
Na izany aza anefa dia mba misy fanamarihana kely ihany izay tiako zaraina aminareo, hamenoana ny fankalazana androany.
Henontsika teo fa rehefa tafatsangan-ko velona Kristy dia avy hatrany dia nandefa ny Fanahy Masina. Rehefa maty Kristy, dia natahotra ny mpianatra rehetra. Rehefa natahotra izy, dia inona no nanehoany an’izay fahatahorana izay? = nihidy aman-trano ny mpianatra satria natahotra ny jody.Fa tampotampoka teo dia indro Jesoa fa niseho teo afovoany.Tsy vitan’ny hoe I Jesoa tafatsangan-ko velona, fa tena tsy voafatotra na inona na inona. Tsy nisy nahasakana azy na ny fasana, na ny varavarana nihidy, fa tafiditra foana I Jesoa. Ary mainka moa fa ny fon’ny olombelona, ny fontsika – tsy misy mahasakana an’I Jesoa.
Isika olombelona no afaka manaka an’I Jesoa tsy hiditra ao am-pontsika, fa I jesoa kosa dia tsy voafatotra n’inon’inona.
Tampotampoka teo I Jesoa dia tonga teo afovoan’ny mpianatra; ny teniny voalohany tamin’izany di any hoe : “Homba anareo anie ny Fiadanana” – ny fiadanana dia mandalo amin’ny hafaliana. Rehefa nandray an’I Jesoa ny mpianatra dia nahazo ny fiadanana, ary feno hafaliana izy ireo. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Pantekôty – 08/06/2014 – Toriteny